I-HP engena-cwaka kwi-Cylinder-Izixhobo zeGesi eziqhelekileyo ze-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
ISO9809, TPED, DOT umgangatho, njl
I-SinoCleansky ibonelela ngazo zonke iintlobo zesilinda zerhasi yentsimbi. Iimveliso zethu zenziwe ngokwe-GB5099, ISO9809, EN ISO9809 (TPED), iDOT-3AA kunye neminye imigangatho yamanye amazwe. Sinikezela ngeengxelo zovavanyo lweqela lesithathu kwizilinda zethu, ezinje nge-TUV, irejista kaLloyd, iDNV, njl.
Iisilinda ze-SinoCleansky zisetyenziswa ngokubanzi kwi-Oxygen (O2), Nitrogen (N2), Argon (Ar), Carbon Dioxide (CO2), Helium (He), Nitrous oxide (N2O), Hydrogen (H2) njalo njalo, egubungela imveliso, ukulwa umlilo, amandla, ezonyango, ukwakhiwa kwesixeko kunye namanye amacandelo.
Imveliso std: GB5099, ISO9809, EN ISO9809 (TPED), DOT-3AA
Umthamo wamanzi: 0.5L - 200L
Uxinzelelo Ukusebenza: 15Mpa, 20Mpa, 23Mpa, 30Mpa
Enobubanzi engaphandle: 108mm - 406mm njl
Isilinda segesi yentsimbi kunye nesilinda sonyango
I-GB5099 / ISO9809
Isilinda esidumileyo seBillet
Isilinda serhasi yokucima umlilo (CO2)
I-OD267-15-68L / 67.5L
Njani malunga nezinto ezingavunyelwanga zeCylinder engenan- isimbi yegesi?
Izinto zokwenza imveliso ikakhulu kubandakanya 37Mn / 34CrMo4 / 30CrMo & Steel Billet / Steel Pipe.